Iingcamango Zegumbi Lokuphila | Eyekhala 2022
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcinga zebar yasekhaya ezinesitayile. Ibha yasekhaya yindawo entle yokudibanisa ii-cocktails zakho ozithandayo ukuze uphumle kwaye wonwabe. Kule galari yoyilo sabelana ngemifanekiso ukukhuthaza, kunye nokubonelela ngezimvo zokuseka ibha yakho yasekhaya. Ibha yasekhaya eboniswe kumfanekiso ongentla ingesitayile kwaye ...
Iingcamango zomntu womqolomba kwigumbi elincinci
Igalari yemibono yomqolomba wegumbi elincinci kubandakanya izinto, uhombiso, ifanitshala, ukugqiba, ukukhanya kunye nokuzonwabisa. Jonga imifanekiso yoyilo lomqolomba omncinci.
Iibhari zasekhaya ezingama-39 (Iingcamango zoyilo kunye neMifanekiso)
Le galari inezinto zokuhombisa zasekhaya ezinemibono yoyilo kunye nemifanekiso. Fumana ibha yasekhaya efanelekileyo ukusuka kolunye loyilo olumangalisayo lwangaphakathi.
Ungalukhetha njani udonga lwe-aksenti kwisikhokelo segumbi lokuhlala ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Jonga imifanekiso yegumbi lokuhlala egumbini lokukhuthaza.
Jonga eyona ndawo intle yokupenda imibala yoyilo lwesitayile. Fumana imibala yepeyinti yegumbi lokuhlala kwaye ubone ukuba yeyiphi imibala ethandwa kakhulu kubandakanya indibaniselwano yemibala onokuyisebenzisa kuyilo oluhle.
Isikhokelo sendoda imibono yomqolomba kunye neentlobo ezithandwa kakhulu kuyilo lwakho lwangaphakathi. Jonga imifanekiso yendlu yomqolomba ekhayeni lakho.
IPiano enkulu kwigumbi lokuhlala (Isikhokelo soYilo)
Ipiyano enkulu kwigumbi lokuhlala indawo yokuhlala kunye nendawo yokubeka, lingakanani igumbi olifunayo kunye nobukhulu bepiyano obudumileyo. Fumana iingcamango zepiyano ezinkulu kunye nosana.
Izimvo zangoku zangaphantsi kubandakanya ibha, igumbi lokulala, igumbi lomdlalo kunye namagumbi okuhlala. Jonga imifanekiso yoyilo lwangaphantsi lwangoku kwaye ufumane iingcebiso zokulungisa kwakhona.
Igaraji iguqulwe yaba ligumbi lokuhlala (iinguqu eziGuquliweyo)
Konke okufuneka ukwazi malunga negaraji kuguqulwe kwaba ligumbi lokuhlala. Jonga igalari yethu yegaraji eguqulweyo ukuze ube nemibono yoyilo lwegumbi lokuhlala.
Igalari yethoni entle yomhlaba yoyilo egumbini lokuhlala. Kuba imibala yomhlaba ayithathi cala, ikhangeleka intle xa idityaniswe phantse nawo nawuphi na umbala, isenza ukhetho olufanelekileyo kuyilo lwegumbi lokuhlala. Jonga imifanekiso yezimvo zamagumbi ezidumileyo onokuzisebenzisa ...
Imibono engama-30 yelanga - Uyilo oluLungileyo kunye neMifanekiso yokuhombisa
Igalari yeengcinga ezintle zelanga. Ukongezwa kwelanga kwikhaya lakho kufana nokudibanisa ipatio yangasemva kunye negumbi lokuhlala. Uyilo olugqwesileyo kwelanga luzisa ngaphandle kwaye likuvumela ukuba ukonwabele ukuziva ungaphandle nangaliphi na ixesha lonyaka. Ezantsi zezinye zezinto ozithandayo zelanga ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zefanitshala, iifestile, imibala yepeyinti kunye nokuhonjiswa.
Igalari yoyilo oluhle lwelanga elinoluhlu olubanzi lweendlela zegumbi. Fumana izimvo zokongezwa kwelanga, iikiti, 3 & 4 amagumbi exesha kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokusebenzisa.
I-27 yoyilo oluMnandi lweFoyer kunye neMibono yokuhombisa
Wamkelekile kwigalari yoyilo lweembono zethu. Fumana imibono yefoyer yokugqibezela, ifenitshala, kunye nokuhombisa ukuze ubonakalise iindwendwe zakho njengoko zifika kwaye zenza indawo efudumeleyo wena kunye nosapho lwakho.
Iingcamango zokuGcina iithoyi kwigumbi lokuhlala
Iingcamango zokugcina izinto zokudlala kumagumbi okuhlala malunga nayo nayiphi na indlela yoyilo lwasekhaya. Imifanekiso yokhetho lokugcina abantwana lokugcina igumbi lakho lilawulwa.
Igalari yomnyango wegaraji kuyilo lwegumbi lokuhlala. Fumanisa ngeendlela ezahlukeneyo zeminyango yegaraji kubandakanya iingcango zeglasi, phezulu nangaphezulu, amacandelo kunye nezitayile zekhenophi.
Izitena eziBonakalisiweyo zeGumbi lokuPhila (Iingcamango zoyilo)
Uyilo oluhle lodonga lwezitena kwigumbi lokuhlala. Jonga imifanekiso yeendawo zomlilo ezakhiwe ngezitena, iindonga zesandi kunye nemibala yepeyinti
Amalungiselelo eGumbi lokuPhila aBalaseleyo ngeTV
Fumana awona malungiselelo okuhlala ngeTV. Fumana izimvo malunga negumbi lokuhlala, ukubeka iTV yakho ngaphezulu kweziko, ekoneni, okanye ukuncokola ..
Amagumbi okuhlala ama-39 amahle anemigangatho yokhuni oluqinileyo
Igalari yamagumbi okuhlala amahle anemigangatho eqinileyo yomthi. La magumbi okuhlala aquka izitayile ezinje ngesintu, ezangoku, ezangoku, ezorhwebo, kunye neengcibi.
Iingcamango zeGumbi lokuPhila laNgoku (ukuhonjiswa kunye noyilo)
Igalari yemibono yangoku yegumbi lokuhlala enemibala eyahlukeneyo, ifanitshala kunye nokuhonjiswa. Fumana ukhuthazo lokuhombisa igumbi lakho lokuhlala langoku usebenzisa iindlela ezintsha zoyilo.
yintoni intombi yembeko inoxanduva
ezimbini zibe yivesi enye yebhayibhile
thengisa ilokhwe yam yomtshato evenkileni
iingoma zokwamkela amarhe zakudala